Shirka arrimaha Soomaaliya oo maanta ka furmaya Brussels - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Shirka arrimaha Soomaaliya oo maanta ka furmaya Brussels
Shirka arrimaha Soomaaliya oo maanta ka furmaya Brussels
July 16, 2018 admin584
Magaalada Brussels ee Xarunta dalka Belgium-ka, waxaa maanta oo Isniin ah ka furmaya shirka Somali Partnership Forum oo looga hadlayo arrimaha Soomaaliya, kaasi oo soconaya 16-ka ilaa 17-ka bishan July.
Sidoo kale shirkan waxaa ka qeyb galaya Bankiga Aduunka, Midka Afrika, Hay’ada lacagta Aduunka ee IMF, Midowga Afrika, Qaramada Midoobey, Jamaacada Carabta iyo Qaar kamid ah Dowladdaha daneeya arimaha Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad oo ka mid ah masuuliyiinta shirkan ka qeyb galeysa oo la hadlay VOA-da ayaa waxa uu sheegay shirkan in lagu eegayo horumarka ay ka sameysay Soomaaliya, dhanka amniga iyo dhaqaalaha.
“Shirkan waxaan ka rajeyneynaa inay ka soo baxaan qodobo Soomaaliya dan u ah, maya weli ma arkin wafdi ka socda Somaliland oo shirkan ka qeyb galaya, ka dowlad ahaan intii aan jirnay waxaan gaarnay guulo waa weyn oo dhanka amniga la xiriira.” Ayuu yiri Wasiir Cawad.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa Khudbadiisa furitaanka shirka la filayaa inuu ku faah faahiyo waxyaabaha la taaban karo ee uu dalkan ka qabtay mudadii uu xafiiska fadhiyay.
Tagged Brussels Somalia Partnership Forum SomaliaConference
Xaflada Qalinjabinta Ardayda Dugsiga Sare Hayaan-Cadaado (Sawirro)
Qaar ka mid ah Wadooyinka Muqdisho oo xiran
Wasiirka cadaalada oo ugu baaqay ehelka marxuumkii xabsiga dhexe ku dhintay inay aasan maydka
Sawirro: Daallo Airlines oo Cadaado ka bilowday duulimaadyo toos ah